Semalt: Zavatra tokony ho fantatrao momba an'i Darodar sy Social-Buttons.com
Miresaka bebe kokoa momba ny fahaiza-manaonao amin'ny fitantanana tranonkala e-commerce ny fahazoana tahirin-kevitra madio sy marina amin'ny efi-tranonkala. Ny fampiasana ireo metrika azo tsapain-tanana mahitsy mba handrefesana ny fivoaranao an-tserasera dia tena manan-danja tokoa rehefa mijery Internet sy marketing marika . Na dia izany aza dia mety hikorontana ny tranokalam-be iray misy ny darodar.com sy ny spam referral social-buttons.com.
Michael Brown, Semalt Mpitantana Success Manager, dia manazava fa ny tranonkala voakasik'izany darodar.com sy ireo fandrahonana hafa dia mampihena ny taham-pitenenana ambony, eo akaikin'ny 100%, izay manan-danja indrindra izay mitarika algorithms amin'ny alàlan'ny Alaharo ireo tranonkala ambany. Ny fametrahana fanapahan-kevitra miorina amin'ny tranokalan'ny Google Analytics notontosain'ny social-buttons.com sy darodar.com dia mitarika ho amin'ny faharavana tanteraka. Amin'ny teny tsotra, ireo tranonkala misy taham-pitenenana avo dia mandika fa ny antson-tendan'ny fivoriana isaky ny zero.
Darodar.com: Inona io?
Ny fahalianana amin'ny fahalianana, ny mpanolotsaina ara-barotra sy ny tompon'ny tranonkala dia manao ny fikarohan'i Google hahatakatra hoe avy aiza ny ankamaroan'ny fifamoivoizana. Raha ny tena dikany, ny valiny dia manondro fa ny anaran'ny tranonkala miresaka momba ny fifamoivoizana dia tsy azo ampisaina ao amin'ny Google Analytics. Tao anatin'izay volana vitsivitsy lasa izay, tranonkala iray tsy misy fantatra antsoina hoe Darodar.com no resahina ao amin'ny tatitra Google Analytics. Raha lazaina amin'ny teny hafa, Darodar.com dia sariam-piraketana an-tserasera noforonina avy amin'ny fitsidihana bots tao amin'ny tranokalanao an-tserasera.
Araka ny voalazan'ny manam-pahaizana IT dia manova ny anarana sy code izay ampiasaina mba hamoronana tranonkala spam toy izao ny spammers. Toy izany koa ny an'i Darodar.com amin'izao fotoana izao. fitaterana sandoka amin'ny tranokalam-pifaneraserana ary fanitsiana ny tatitra ao amin'ny Google Analytics amin'ny social-buttons.com.
Fahatakarana ny angona Google Analytics
Darodar.com: inona io? Ity no fanontaniana niely tany amin'ny indostrian'ny varotra dizitaly. Antsoina koa hoe social-buttons.com, darodar.com dia miasa mba hanova ny tatitra momba ny GA anao sy ny angon-drakitra amin'ny alàlan'ny fanofana fifamoivoizana tsy fantatra sy sandoka ao amin'ny tranonkalanao. Amin'ny maha-tompon'ny varotra anao, tsy te-hanapa-kevitra mafy ny fanapahan-kevitra hentitra ianao miankina amin'ny tatitra avy amin'ny GA anao.7) Tsy mandainga ny isa. Raha manana taham-pitenenana maherin'ny 70% ny tranonkalanao, dia mila averinao jerena ny paikady fampielezankevitra. Raha manamarika ny vanim-potoanan'ny zero mandritra ny zero ny tranonkalanao, ny ankamaroan'ny fitaterana dia avy amin'ny bots, ny fifamoivoizana tsy fantatra, ary ny spam referral toy ny social-buttons.com. Izany dia manazava ny antony mahatonga anao hivadika ny teny fototra midina ambany amin'ny algorithm.
Nahoana ianao no tsy tokony hijery ireo rohy hafahafa nalefa amin'ny tranokalanao
Ny fandraketana tranonkala iray dia mitaky fiheverana amim-pahamendrehana. Ny fanerena tabilao na mikaroka rohy maloto nalefa taminao avy amin'ny spammers dia manimba anao amin'ny hackers. Ny mpikiravira dia manantena anao hanamarina ny maha-identity ny tranonkalany ary mametraka ny adiresy ao amin'ny Google Analytics anao. Manantena ihany koa ny piraty anao mba hikirakiranao ny 'karohy Tab mba hikaroka' aseho ao amin'ny GA anao.
Raha vao tafiditra ao anatin'ny trosan'izy ireo ianao ary tsindrio ny bokotra tabilao, dia alefa mankany amin'ny tranonkala hafa maloto, izay azon'ny mpihazakazaka miditra mora aminao ny fidirana an-tserasera.
Inona àry ny Darodar.com? Nahoana izy io no misy? Social-buttons.com sy Darodar.com dia spam referral ampiasaina amin'ny spammers mba hahazoana saram-pandrefesana. Aorian'ny fividianana rohy malaza nalefa taminao, dia nandoa onitra noho izany ny spam. Ny fototry ny famoronana rohy fanavaozana hosoka dia ny manovo ny mpitsidika sy ny tompon'ny tranonkala mba hanindry ny rohy ary hahazoana vola be ho setrin'izany Source .